Ciidamada xasillinta oo hub badan kusoo qabtay howlgal culus oo ay ka sameeyeen Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada xasillinta oo hub badan kusoo qabtay howlgal culus oo ay ka sameeyeen Muqdisho
Ciidamada isku dhafka ah ee loogu magac daray kuwa xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho oo habeenkii xalay howlgal culus ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa howlgalkaasi kusoo qab-qabtay dhalinyaro badan iyo sidoo kale ciidamo hubeysan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Howlgalkaasi oo dhacay saqdii dhexe ee xalay ayaa laga fulliyay xaafado ka tirsan degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, waxayna ciidamadaasi galeen dhamaan guryaha ku yaalla degmadaasi, iyagoo kadibne baaritaano ku sameeyay islamarkaana kusoo qabtay hub iyo dad badan, kuwaas oo qaarkood ugu dambeyn lasii daayay, kadib markii lagu waayay wax dambi ah.
Saraakiisha hoggaaminaysay howlgalkaasi ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay inay sii daayeen inta badan ciidankii iyo dhalinyaradii hub ka dhigista lagu sameeyay, iyagoona ku wargeliyay inay hubkooda ka doontaan xarunta xisbiga oo ku taallo isbartiibadda, si loo diiwaan-geliyo qoryaha islamarkaana loo ogaado askarta iyo taliska ay ka tirsan yihiin.
Howlgalka ay ciidamada xasillinta ka wadaan qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid keeni kara isbedel dhinaca ammaanka ah, waxaana howlgalkaan lagu soo beegay xilli lagu guddo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Si kastaba ha ahaaatee, labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaayey falal lid ku ah ammaanka magaalada, kadib markii dhowr habeen oo isku xigtay gudaha magaalada lagu dilay nabadoono iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.